Ubuqaqawuli - Xhosa - Englisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: ubuqaqawuli (Xhosa - Englisch)
Wathi yena, Khawundibonise ubuqaqawuli bakho.
Ubuqaqawuli bukaYehova beza endlwini ngendlela yesango elibheke empumalanga.
Noko, ndihleli nje, buya kulizalisa ihlabathi lonke ubuqaqawuli bukaYehova.
Ilifu layigubungela intente yokuhlangana, ubuqaqawuli bukaYehova bawuzalisa umnquba.
Nabo ke bukhona ubuqaqawuli bukaThixo kaSirayeli, bunjengombono endawubonayo entilini leyo.
Musa ukoyika, yakuba sisityebi indoda, Bakwanda ubuqaqawuli bendlu yayo:
Ubuqaqawuli bukaYehova mabube ngunaphakade; UYehova makavuye ngezenzo zakhe;
Uphakamile ngaphezu kweentlanga zonke uYehova, Bungaphezulu kwamazulu ubuqaqawuli bakhe.
Ezi zinto wazithetha uIsaya, oko wabubonayo ubuqaqawuli bakhe, wathetha ngaye.
Kuba ubukhaphukhaphu bembandezelo yethu eyeyomzuzwana busisebenzela ngokuncamise kwaphela ubuqaqawuli obukhulukazi obungunaphakade
Bunobungangamela ubuqaqawuli bendili yakho; Ngeendawo zakho ezibalulekileyo ndiya kucamngca.
Baphuma ke ubuqaqawuli bukaYehova, bemka emnyango wendlu, beza kuma phezu kweekerubhi.
Benyuka ubuqaqawuli bukaYehova, besuka phakathi komzi, bema entabeni engasempumalanga kuwo umzi.
Ukuba babazise oonyana babantu ubugorha bakhe, Ubuqaqawuli obuhle bobukumkani bakhe.
Ziphakamise ngaphezu kwezulu, Thixo, Bube phezu kwehlabathi lonke ubuqaqawuli bakho.
Ziya kuloyika iintlanga igama likaYehova, Nookumkani bonke behlabathi ubuqaqawuli bakho;
Ababingeleli ababa nakungena endlwini kaYehova, ngokuba ubuqaqawuli bukaYehova bayizalisa indlu kaYehova.
Kuya kuthi ngaloo mini, busweleke ubuqaqawuli bukaYakobi, ingcumbeke inyama yakhe etyebileyo.
mikey (Englisch>Polnisch)anong ibig sabihin ng pinupog? (Tagalog>Englisch)liquenoide (Spanisch>Deutsch)niedergang (Deutsch>Tschechisch)kekalahan (Malaysisch>Arabisch)jejunostomy tube (Englisch>Griechisch)apn 82: (Englisch>Isländisch)jevandjeljem (Serbisch>Arabisch)cedendo (Italienisch>Dänisch)pārmērīgu (Lettisch>Maori)bogies (Französisch>Englisch)prokopov (Englisch>Deutsch)vervangbare (Holländisch>Slowakisch)nikdy (Tschechisch>Arabisch)crocodiliens (Französisch>Holländisch)kalisz (Polnisch>Englisch)holocaust (Holländisch>Französisch)nestabilnost (Kroatisch>Englisch)противопоставляли (Russisch>Englisch)percebre (Katalanisch>Russisch)pogung na sa (Tagalog>Englisch)verauslagt (Deutsch>Rumänisch)bankta (Türkisch>Englisch)ben (Schwedisch>Deutsch)acha ji aur sunao kuch (Hindi>Englisch)